Ngwa ụlọ ọrụ, ndị na -ebubata ya - ndị na -emepụta ngwaahịa China
Ọ nwere nguzogide abrasion, nguzogide oyi, iku ume, nguzogide ịka nká, na udidi dị nro. , Nchedo gburugburu ebe obibi na ọdịdị mara mma, ọ bụ nhọrọ kacha mma iji dochie akpụkpọ anụ (mkpuchi mkpuchi mbụ), ugbu a ọtụtụ azụmaahịa ga -ere akpụkpọ anụ microfiber dị ka mkpuchi mkpuchi mbụ na ọnụ ahịa dị elu.
Grey Microfiber Akpụkpọ anụ na -anọte aka Oche akpụkpọ anụ oche oche
Aha zuru oke nke akpụkpọ anụ microfiber bụ "akpụkpọ anụ microfiber na -eme ka ọ dị ike". Ọ bụ nke akpụkpọ anụ mịpụtara ọhụrụ mepụtara na akpụkpọ anụ sịntetik. Ọ bụ nke ụdị akpụkpọ anụ ọhụrụ. Ọ nwere nguzogide abrasion, nguzogide oyi, iku ume, nguzogide ịka nká, na udidi dị nro. Nchedo gburugburu ebe obibi na ọdịdị mara mma, ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji dochie akpụkpọ anụ (mkpuchi mkpuchi mbụ), ugbu a ọtụtụ azụmaahịa ga -ere akpụkpọ anụ microfiber dị ka mkpuchi mkpuchi mkpuchi mbụ na ọnụ ahịa dị elu.
Microfiber Car Beige adịchaghị mma nke dị ka akpụkpọ anụ
Akpụkpọ anụ Microfiber PU, na-eji nylon maka ala yana polyurethane maka akwa oyi akwa, bụ akpụkpọ anụ nwere akwa dị elu, anyị na-enye ndị ahịa nhọrọ ihe karịrị ụdị iri abụọ.
Abrasion na -eguzogide New Napa Microfiber Vegan Car Akpụkpọ anụ ụgbọ ala maka oche ụgbọ ala
Akpụkpọ anụ microfiber dị elu karịa akpụkpọ anụ n'okwu nke ịdị n'otu, ike dọkatụrụ agba, nchapụta agba na ojiji elu, nke ghọrọ ntụzịaka mmepe nke akpụkpọ anụ sịntetik nke oge a na arụmọrụ ya nke ọma, nchedo gburugburu ebe obibi, anaghị egbu egbu, ọnụego ojiji dị elu.
Akwa akpụkpọ anụ Microfiber dị elu nwere ọnụ ahịa asọmpi
Akpụkpọ anụ microfiber Bensen nwere nguzogide abrasion dị elu, nkasi obi na ike ọdụdọ. Ebe Bentham nwere ụlọ ọrụ nke ya, ọ na -enwe ike ịnye ọnụ ahịa asọmpi na ngwaahịa dị elu karịa. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ọdịdị dị elu na -enweghị skid TPE Car Foot Mat
TPE ụgbọ ala akwa akpụkpọ ụkwụ nwere uru nke ịbụ onye na-enweghị mmiri, na-eguzogide ma dịkwa mfe nhicha.
Igwe anaghị agba nchara PVC waya Mat ụgbọ ala akpaaka omenala ime ụlọ
Ihe mkpuchi ụgbọ ala silk coil na-enwe omume enyi na gburugburu ebe obibi na enweghị mmetọ, na-enweghị ihe ọ bụla na-emerụ mmadụ ahụ, ma gafere ule dị mma.
Abrasion na -eguzogide ọgwụ Microfiber PU akpụkpọ anụ kacha sie ike
Akpụkpọ anụ sịntetik Microfiber nwere ọkpụrụkpụ na ọka dị iche iche, nke nwere ike izute ihe ịchọ mma nke ọnọdụ dị iche iche n'ime ime ụgbọ ala, na microfiber PU akpụkpọ anụ na -emezu ihe achọrọ maka ndụ ndụ ndụ.
Ihe eji eme akwa akpụkpọ anụ PVC
Matskwà ụgbọ ala Bensen dị mfe nhicha ma lekọta ya anya nke ọma, enwere ike ihicha akwa nhicha mmiri na -ehicha ya.
Mbadamba ụfụfụ Diamond na -enweghị mmiri maka akwa ala ụgbọ ala
Akụkụ kachasị mkpa nke akwa akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ PVC bụ ịtọgbọ n'ime ikuku ụgbọ ala dị elu, yana ọnụ ahịa, enweghị ntụpọ agaghị achịkọba uzuzu, dị mfe nhicha, mana ọ naghị adịkwa mfe ịmịpụ, nchekwa dị elu.
123456 Ọzọ> >> Peeji 1 /13